AHOANA NY FOMBA AHAFAHANA MAMPANDEHA NY FAMINDRANA MPAMPIASA HAINGANA AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny famindrana mpampiasa haingana amin'ny Windows 10
Mahasoa ny Fast User Switching rehefa manana kaontim-pifandraisana mihoatra ny iray amin'ny solosainao ianao, ary mamela ny mpampiasa hiditra anaty solosaina raha mbola miditra ilay mpampiasa hafa. Ohatra, manana solosaina tokana ao an-tranonao ianao sy ny iray tam-po aminao na koa ny ray aman-dreny no mampiasa izany, amin'ny kaontiny manokana. Azonao atao ny mianatra mifamadika avy amin'ny kaontinao mankany amin'ny kaontin'ny mpampiasa hafa miaraka amin'ity endri-javatra ity. Mety tsy manohana an'ity endri-javatra ity ny rindrambaiko sasany, ary ny fanovana kaonty vaovao na taloha dia tsy mahomby hatrany. Ny safidy Fast User Switching dia mamela ny mpampiasa maro hiditra amin'ny rafitra nefa tsy mamafa ny angona miasa an'ny mpampiasa hafa na mitaky ny hamerenany. Ity dia endri-javatra tsy misy fatra nomen'ny Windows 10, izay azo alefa na alefa isaky ny takian'ny mpampiasa. Ireto misy fomba vitsivitsy ahafahanao mamela na mampandeha ny Fast User Switching ao amin'ny Windows 10.
mampiasa usb drive toy ny ondrilahy
Raha fintinina, rehefa mampiasa ny PC misy ny kaontinao manokana ianao, dia misy mpampiasa hafa afaka miditra amin'ny kaontiny raha tsy mila mivoaka amin'ny kaontinao manokana ianao. Na dia mahasoa aza ity dia misy fatiantoka ihany koa. Raha ny kaontin'ny mpampiasa izay tsy voasonia dia namela fampiharana mavitrika ho an'ny loharanon-karena, hananana olana amin'ny fampisehoana amin'ny mpampiasa hafa izay mampiasa ny PC amin'ny kaontin'ny mpampiasa azy.
Alefaso na alao ny famadihana mpampiasa haingana ao amin'ny Windows 10
Ahoana ny fomba hampandehanana ny fifamadihan'ny mpampiasa haingana amin'ny Windows 10
Fomba 1: fampiasana ny tonian-dahatsoratry ny vondrona politika
Fomba 2: Mampiasa ny Registre Editor
Ahoana ny fomba hanafoanana ny fifamadihan'ny mpampiasa haingana amin'ny Windows 10
Fomba 1: fampiasana ny politikam-tarika
Fanamarihana: Ity fomba ity dia tsy mety amin'ny mpampiasa Windows 10 Home, satria io fomba io dia tsy voafaritra afa-tsy amin'ny Windows 10 Pro, Education, ary Enterprise Editions.
1. Tsindrio ny Windows Key + R dia soraty gpedit.msc ary tsindrio Enter raha hanokatra Tonian-dahatsoratra politika.
2. Mizotra amin'ireto politika manaraka ireto:
3. Hamarino tsara fa mifantina Logon avy eo ao amin'ny baravarankely ankavanana, tsindrio indroa ny Afeno ireo teboka fidirana ho an'ny Fast User Switching politika.
4. Ankehitriny, eo ambanin'ny varavarankely fananany, safidio ny sembana Safidy ahafahana mifamadika haingana amin'ny Windows 10.
6. Vantany vao vita, akatona ny zava-drehetra ary avereno ny PC-nao mba hitahiry ireo fanovana.
Vakio ihany koa: Amboary ny serivisy fanontana printy eo an-toerana tsy mandeha
Fanamarihana: Hamarino tsara fa backup Registry alohan'ny hanaovana fanovana, satria fitaovana mahery ny Registry.
1. Tsindrio ny Windows Key + R dia soraty regedit ary tsindrio Enter raha hanokatra Editor Registra.
2. Mizotra amin'ireto lakilen'ny fisoratana anarana manaraka ireto:
Mandehana any amin'ny HKEY_CURRENT_USER
Eo ambanin'ny HKEY_CURRENT_USER tsindrio ny SOFTWARE
Mandrosoa Microsoft ary sokafy ny Windows.
Midira ao amin'ny CurrentVersion arahin'ny Politika.
Kitiho ny System.
3. Mikaroha HideFastUserSwitching. Raha tsy hitanao izany dia tsindrio havanana amin'ny RAFITRA avy eo mifantina Sanda vaovao> DWORD (32-bit).
adim-pianakaviana lalao an-tserasera zoom
4. Omeo anarana ity DWORD vao noforonina ity ho HideFastUserSwitching ary tsindrio Enter.
5. Tsindrio indroa amin'ny HideFastUserSwitching DWORD ary manova ny sandany araka ny 0 hahafahanao mamela ny Fast User Switching ao amin'ny Windows 10.
6. Vantany vao vita, kitiho ok ary manakatona Registry Editor.
alt-tab tsy mandeha
7. Raha tehirizo ny fanovana mila averinao indray ny PC.
Ahoana ny fomba hijerena raha azo alefa ao amin'ny Windows 10 ny Fast User Switching
Araho azafady ireo dingana voalaza etsy ambany raha hijery raha azo alefa na tsy mandeha ny fampisehoana Fast User Switching:
1. Press Alt + F4 fanalahidy miaraka hanokatra ny Mihidy Windows.
2. Raha afaka mahita ny Ampifamadiho ny mpampiasa Safidio ao amin'ny menio scroll-down, avy eo ampidirina ny fampisehoana Fast User Switching. Raha tsy izany dia kilemaina izy io.
Vakio ihany koa: Amboary ny olan'ny Cursor Blinking ao amin'ny Windows 10
Rehefa mampiasa maody Fast Switching mpampiasa ho an'ny mombamomba iray na maromaro dia mety hampiasa ny loharano rehetra ny rafitrao ary mety hihemotra ny PC-nao. Azo inoana fa hampihena ny fahombiazan'ny rafitra io. Noho izany dia mety ho lasa ilaina ny mampandeha an'io fampiasa io rehefa tsy ampiasaina.
1. Vohay ny Editor Politikan'ny Vondrona avy eo mizaha lalana manaraka izao:
2. Tsindrio indroa amin'ny Afeno ny teboka fidirana ho an'ny fanovana haingana ny mpampiasa varavarankely
3. Raha te-hanafoana ny endrika Fast User Switching ianao dia zahao ny afaka boaty ary kitiho OK.
ny fifandraisana eo an-toerana "tsy misy fampifanarahana ip mety
1. Sokafy ny Mihazakazaha boaty fifampiresahana (Tsindrio bokotra Windows + R) ary soraty regedit.
3. Tsindrio indroa amin'ny HideFastUserSwitching.
Fanamarihana: Raha tsy hitanao ny lakile etsy ambony dia mamorona fanalahidy vaovao amin'ny alàlan'ny Fomba 2 amin'ny Enable Fast User Switching amin'ny Windows 10.
4. Tsindrio indroa amin'ny HideFastUserSwitching SY apetraho amin'ny 1 ny sanda hampijanona ny Feo Mifamadika Mpampiasa Haingana toy ny hita eo amin'ny sary.
Fast User Switching Feature dia endri-javatra mahafinaritra ao amin'ny Windows PC. Izy io dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny rafitr'izy ireo amin'ny fidirany manokana mandritra ny andro maromaro nefa tsy misy fiatraikany amin'ireo rindranasa na rakitra amina kaonty mpampiasa hafa. Ny hany lesoka amin'ity fampiasa ity dia ny fihenan'ny hafainganam-pandehan'ilay rafitra sy ny fahombiazany. Vokatr'izany dia tokony halefa na esorina arak'izay takinao izany.
Hamafa ny tantaranao fisie vao haingana momba ny rakitra ao amin'ny Windows 10
Ahoana ny fomba hanovana ny fahita matetika amin'ny Windows 10
Amboary ity kopian'ny Windows ity dia tsy Error tena izy
Ahoana ny fomba hamahana ny lesoka Windows Update 80072ee2
Manantena izahay fa nanampy ity torolàlana ity ary afaka nianatra ianao ny fomba ahafahana mampandeha na mampandeha ny maody Fast Switching an'ny mpampiasa amin'ny Windows 10 . Raha manana fangatahana / hevitra momba an'ity lahatsoratra ity ianao dia aza misalasala mametraka azy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
mpamily irq tsy latsa-danja mitovy
tsy mandeha ilay mikraoba pro 4
windows 10 1803 tsy nahavita nametraka
ity safidy ity dia tsy misy intsony satria nohavaozina mihoatra ny 10 andro lasa ny solosainao